बा र आमाजस्ता धर्मराज र जीवराज अर्याल सर ! | चितवन पोष्ट
बा र आमाजस्ता धर्मराज र जीवराज अर्याल सर !
–सुमित्रा कँडेल (सापकोटा)
म रोजगारीका लागि भौँतारिँदै जाँदा चितवन पोष्ट दैनिकको कार्यालय आइपुगेँ । खासमा चितवन पोष्ट पढेकै आधारमा चितवन पोष्ट दैनिक आइपुगेकी हुँ । २०७० सालको कुरा हो । एकदिन चितवन पोष्ट दैनिक पढ्ने क्रममा चितवन पोष्ट दैनिकमा ‘वितरक आवश्यकता’ शीर्षकमा एउटा विज्ञापन देखेँ । त्यही विज्ञापनको आधारमा मैले चितवन पोष्ट दैनिकको कार्यालयमा सम्पर्क गरेँ । गोविन्द अर्याल सरले फोन उठाउनुभयो । सामान्य कुराकानीपछि गोविन्द सरले कार्यालयको लोकेसन बताइदिनुभयो । सोही आधारमा म चितवन पोष्टको कार्यालय आइपुगेकी थिएँ ।
पत्रिकाको कार्यालय आइपुग्दा सोधपुछको कुर्सीमा बसिरहेका एक जना युवाले मलाई ढोकामा देख्नासाथ ‘हजुरले हो मलाई फोन गर्नुभएको ?’ भनेर सोध्नुभयो । ‘हजुर, हो सर !’ मैले भनेँ । त्यसपछि मेरो फोन उठाउने मान्छे गोविन्द सर नै हो भन्ने मैले सहजै अड्कल लगाएँ । त्यसपछि गोविन्द सरले मलाई कामका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । ‘तलब तीन हजार हुन्छ, बिहान २ घन्टा काम गर्नुपर्छ’ भनेपछि ‘हुन्छ, म काम गर्न तयार छु’ भनेँ । भोलिपल्ट साउने संक्रान्तिको दिन थियो । २०७० सालको साउने संक्रान्तिदेखि नै मेरो सम्बन्ध चितवन पोष्ट दैनिकसँग जोडिन पुग्यो ।
पत्रिका वितरण गर्नु चुनौतीपूर्ण नै थियो । तर, आफूलाई पनि सानो–ठूलो काम चाहिएको थियो । त्यसैले, सुरूका दिनमा केही गाह्रो महसुस भए पनि नआत्तीकन काम गरेँ । सोही क्रममा गोविन्द सरले मलाई ‘विज्ञापन खोजेर पत्रिकामा छपाउन सके त्यसबाट पत्रिकाको नियमअनुसारको कमिसन पाइन्छ’ भन्नुभयो । समयअनुसार मैले पनि कहिलेकाहीँ विज्ञापन खोजेर ल्याउँथेँ । दसैँ आयो । त्यतिबेलासम्म पत्रिकाको वितरण शाखा हेर्ने प्रेम बराल सरले भन्नुभयो, ‘अफिसले दसैँ बोनस बाँडेको छ ।’ कार्यालयको नियमअनुसार मैले दसैँ बोनस पाउनका लागि कम्तीमा पनि ६ महिना पुग्नुपर्ने थियो । तर, मैले चितवन पोष्टमा काम गरेको ६ महिना पुगेको थिएन । त्यसैले, मैले पाउँछु भन्ने मलाई लागेकै थिएन ।
फूलपातीको दिन कार्यालयबाट पत्रिकाका संस्थापक सम्पादक स्वर्गीय धर्मराज अर्याल सरले फोन गर्दै भन्नुभयो, ‘सुमित्राजी, तपाईंको मेहनत र इमानदारिताको मूल्यांकन गर्दै चितवन पोष्ट दैनिकले तपाईंलाई दसैँ खर्च दिने निर्णय गरेको छ, खर्च लिन आउनोस् ।’ ‘हुन्छ सर !’ भन्दै म कार्यालय आइपुगेँ । त्यतिबेला कार्यालयमा धर्मराज सर र जीवराज सरमात्रै हुनुहुन्थ्यो । धर्म सरको हातबाट मैले दसैँ खर्चस्वरुप बोनस लिएँ । मैले नसोचेको सफलता पाएजस्तै लाग्यो । सरहरुसमक्ष खुसी व्यक्त गरेपछि जीवराज सरले भन्नुभयो, ‘कामलाई ठूलो–सानो भनेर हेलाँ नगर्नू, त्यसले अन्य अवसर पनि दिलाउन सक्छ ।’ मलाई त्यो वाक्यले निकै तरंगित बनायो । मनमा तिनै शब्दमात्रै गुञ्जिरहे ।
दसैँ सकियो । त्यसपछि एकदिन पत्रिकामा छापिएका विज्ञापनको पैसा संकलन गरेर कार्यालय आएँ । त्यतिबेला जीवराज सरले कुन्नि के सम्झेर ‘सानोतिनो भए पनि जागिर गर्ने हो ?’ भनेर सोध्नुभयो । मलाई पनि जागिर चाहिएकै थियो । भित्रभित्रै खुसी हुँदै ‘पाए त गर्थें नि सर’ भनेँ । त्यत्तिकैमा धर्मराज सरले पनि हाँस्दै भन्नुभयो, ‘इमानदार र मेहनती मान्छे, कहिल्यै भोको बस्नुपर्दैन ।’ म पनि भनेजस्तो काम पाए गर्ने विचार गरेरै बसेकी थिएँ ।
पत्रिकासँगको मेरो सम्बन्धले एक वर्ष पार गरिसकेको थियो, गते ठ्याक्कै याद भएन । तर, २०७१ सालको कात्तिकमा हो । कार्यालयबाट जीवराज सरले फोन गरेर भन्नुभयो, ‘सुमित्राजी, तपाईंलाई हामीले जागिर मिलाएका छौँ, भोलि बिहान १० बजे अफिस आउनोस् ।’ उहाँको फोनलाई पछ्याउँदै म बिहानको पत्रिका वितरणको काम सकेर हतारहतार घर पुगेर खाना खाएर बोलाएकै समयमा कार्यालयमा उपस्थित भएँ, जतिबेला दुवैजना सरहरु कार्यालयमै बसिरहनुभएको थियो । त्यतिबेला जीवराज सरले भन्नुभयो, ‘आजदेखि तपाईंले हाम्रो कार्यालयको रिसेप्सनिस्ट पदमा रहेर काम गर्नुप¥यो, आजदेखि सँगै काम गर्ने अवसर मिलेको छ ।’
चितवन पोष्टजस्तो पत्रिकामा काम गर्न पाउँदा म त्यसै खुसी थिएँ । कार्यालयको मालिकले नै बोलाएर जागिर दिलाउनुलाई मैले जीवनकै सबैभन्दा ठूलो सफलता ठानेकी छु । ‘काम त गर्ने, तर पारिश्रमिक कति हुन्छ त सर ?’ मैले जिज्ञासा राखेँ । मेरो प्रश्न पूरा हुन नपाउँदै जीवराज सरले भन्नुभयो, ‘महिनाको पाँच हजार हुन्छ, समयअनुसार पछि बढ्दै जान्छ ।’ त्यही क्रममा धर्मराज सरले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘बिहान र दिउँसो गरी आठ हजार भइहाल्यो, केको चिन्ता ?’ त्यसदिनदेखि मेरो जिम्मेवारी थपियो । कार्यालयमा समाचारको काममा धर्मराज सर र बाँकी काममा जीवराज सरको निर्देशनअनुसार चल्नुपथ्र्यो । त्यसैले पनि होला, मैले हरेक काममा जीवराज सरको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपथ्र्यो ।
मान्छे न हो, कहिलेकाहीँ गल्ती त भैहाल्छ नै । मबाट पनि कहिलेकाहीँ गल्ती भए होलान् । तर, मसँग कहिल्यै साहूजी र कर्मचारीको व्यवहार भएको जस्तो अनुभव भएन । सधैँ पारिवारिक वातावरणमै काम गर्दै आएँ । कहिलेकाहीँ काम बिग्रियो कि भनेर डर पनि लाग्थ्यो । तर, दुवैजना सरहरुबाट प्रोत्साहन मिल्थ्यो । चाडपर्वमा पनि उहाँहरुले सम्झिने गर्नुहुन्थ्यो । तीज आउँदा हामीलाई घरै बोलाएर पनि दर खुवाउनुहुन्थ्यो । २०७४ सालको तीजमा धर्मराज सरको घरमा दर खाएर छमछम नाचेको अझै सम्झना ताजै छ । दसैँ आउँदा जीवराज सरले टीकाका लागि बोलाउनुहुन्थ्यो । तीजको दर र दसैँको टीका अब मात्र सम्झनामा सीमित हुनेछन् । एक जना कर्मचारीलाई पनि परिवारको सदस्यजस्तै बनाएर राख्न सक्नु सामान्य कुरा थिएन ।
उहाँहरुकै रोजाइमा २०७२ सालदेखि मैले पत्रिका वितरणको पाटो छाडेर पत्रिका वितरण व्यवस्थापनका लागि बिहान सबेरै दुई घन्टा र त्यसपछि बिहान १० देखि दिउँसो ५ बजेसम्म चितवन पोष्ट दैनिककै लागि समय दिँदै आएकी छु । प्रेम बराल सर र एक जना म्याडमले छाडेपछि उक्त जिम्मेवारी मैले सम्हाल्दै आएकी छु । पत्रिकाको काम र पारिश्रमिकबाट सन्तुष्ट छु । हुन त, पैसाले कसलाई पो पुगेको छ र ? तैपनि, जीवराज सरले कहिलेकाहीँ जिस्काउँदै भन्नुहुन्थ्यो, ‘त्यति धेरै पैसा के गर्नुहुन्छ सुमित्राजी ?’ कहिलेकाहीँ मेरा आफन्त र चिनजानका मान्छे चितवन पोष्टको कार्यालयमा आए पनि दुवैजना सरहरुले ‘हामीले नै बोलाएर जागिर दिएको’ भनेर हाँस्दै सुनाउनुहुन्थ्यो ।
सरहरु दुवैजनालाई दुःख र संघर्ष भनेको के हो भन्ने राम्रोसँग ज्ञान भएकोले होला ‘आफ्नो इमानदारितालाई नगुमाउनू, तपाईंले काम छाड्न नचाहेसम्म हामी हटाउँदैनौँ’ भन्नुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ पत्रिकाको स्थापनादेखि हालसम्मको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुहुन्थ्यो । उहाँहरु दुई दाजुभाइबाट पाइरहने सम्मानजनक व्यवहार र हौसलाले कार्यालयमा कहिल्यै अँध्यारो अनुहार गर्न परेन । तर दैवको खेल, कसले पो छेक्न सक्दोरहेछ र ? एक वर्षभित्रै दुवै दाजुभाइले हामीलाई छाडेर जानुभयो । गत वर्ष जेठ ३० गते धर्मराज सरको अकल्पनीय निधनले हामी टुहुरो भयौँ । वर्षदिन बित्न नपाउँदै भएको जीवराज सरको निधनले हामी फेरि टुहुरा भएका छौँ ।
पत्रिकाका लागि यति ठूलो क्षति कहिल्यै भएको थियो । अहिले पनि उहाँहरु बस्ने कुर्सी देख्दा आँखा रसाएर आउँछ । उहाँहरु दुवैजना भगवान्को घरमा जानुभयो भनेर अझै पनि विश्वास लाग्दैन । तर, विश्वास गर्नैपर्ने बाध्यता छ । उहाँहरुलाई सम्झिँदा अझै पनि उहाँहरु आँसुको रुपमा थोपाथोपा बनेर खस्नुहुन्छ । कार्यालयमै बसिरहँदा पनि कतिखेर अफिस आउनुहुन्छ जस्तो लागिरहन्छ । जीवराज सरलाई घरबाट उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदा अवस्था सामान्य नै थियो, त्यसैले पनि पत्याउन गाह्रो भइरहेको छ । अस्पताल पुगिसकेपछि गोविन्द सरलाई फोन गरेर बुझ्दा ‘सामान्य छ दिदी, रिपोर्ट आएको छैन, सायद् एक–दुई दिन अस्पतालमै बस्नुपर्छ होला, रिपोर्ट कस्तो आउँछ हेरौँ’ भन्नुभएको थियो । साँझ फोन गर्दा जीवराज सर आफैँले फोन उठाएर ‘ठीकै छ नानी, चिया र चुरोट खान बाहिर आएको छु’ भन्नुभएको थियो ।
सदाको दिनजस्तै भोलिपल्ट पनि साढे ९ बजे कार्यालय आएँ । हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध भएकोले जीवराज सरकी श्रीमती र म दिदीबहिनी भनेर एकापसमा बोल्छौँ । त्यसैले, कार्यालय आइपुग्नासाथ जीवराज सरको अवस्थाबारे बुझ्न भनेर दिदी ! भन्दै भित्र गएँ । तर, दिदी केही बोल्नुभएन । मेरो प्रश्नको उत्तर मैले उहाँको अनुहारमा प्रस्टै पढेँ । दिदीको अनुहार पढेपछि मेरो पनि मनोबल कमजोर भयो, र म फर्किएँ । त्यसपछि आफ्नै कामतिर लागेँ । केहीछिनपछि जीवराज सरकी बुहारी प्रमिला म्याडम कार्यालयमा आउनुभयो । प्रमिला म्याडमसँग बुझ्दा ‘भेन्टिलेटरमा राखेको छ’ भन्नुभयो । मेरो मन झनै कमजोर भयो । आँखाबाट बररर आँसु खस्न थाले । स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै निरन्तर भगवान्लाई पुकारिरहेँ ।
भोलिपल्ट साँझ शर्मिला र म दुवैजना हस्पिटल पुग्यौँ । मनमा आशा लिएर भित्र आईसीयूमा प्रवेश गरेका हामी दुवैजना मन अमिलो पार्दै बाहिर निस्कियौँ । घर आइपुग्दासम्म पनि मनमा अनेक प्रश्न खेलिरह्यो । भोलिपल्ट १७ गते १२ बज्न नपाउँदै जीवराज सरको निधनको खबर कानमा ठोक्कियो । मनमनै भगवान्लाई गाली गरेँ । कार्यालय सुनसान भयो । कसैले कसैलाई केही भन्ने अवस्था नै थिएन । सबैको मुख बन्द थिए । एकले अर्कालाई हेर्नुबाहेक विकल्पै थिएन ।
जीवराज सर र धर्मराज सरको निधनले हामी मात्र नभई समग्र चितवनको पत्रकारिता क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । चितवन पोष्ट दैनिकका लागि संस्थापक सम्पादक र प्रबन्ध सम्पादक बस्ने कुर्सी रित्तिएका छन् । अहिले कार्यालयमा काम गर्ने जाँगर पनि चल्दैन । तर, समस्याले निम्त्याएको बाध्यतादेखि को नै भाग्न सक्छ र ? म पनि त्यसैमा जेलिएकी छु ।
कार्यालयको मेरूदण्ड नै नहुँदा खल्लो महसुस भएको छ । अहिले भर्खरै कहाँबाट आइपुग्नुहुन्छ भन्नेमात्रै लागिरहन्छ । घरीघरी ‘सुमित्रा !’ भनेको आवाज कानमा गुञ्जिन आइपुग्छ । तर, राम्रो मान्छे हामीलाई मात्रै होइन भगवान्लाई पनि प्यारो लाग्दोरहेछ । त्यसैले त हाम्रो पुकार नसुनी टपक्क टिपेर लगे । मेरा लागि बाजस्ता धर्मराज सर र आमाजस्ता जीवराज सर दुवैजनाको वैकुण्ठ बास होस् । तपाईंहरुको सम्झना सास रहुञ्जेल रहिरहने छ । हजुरहरुजस्तो महान् व्यक्ति खोजेर पनि पाइँदैन । दुवैजनालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली !